Passive Income Financial Freedom ငွေကြေးရှာဖွေပေးမဲ့ System တစ်ခုကိုထည်ထောင်နိုင်ရင် ကမ်းခြေမှာအနားယူနေရင်း က လုပ်ငန်းတွေကအလိုအလျောက်ဝင်ငွေတွေရလာမယ်ဆိုတော့ အားလုံးသဲခြေကြိုက်ပေါ့ဗျာ။ ESBI တို့ဘာတို့ model တွေလဲရှိတာပေါ့ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သိန်း ၁၀၀ နဲ့ ၂၀၀ ကြားရင်းနှးနိုင်တဲ့လူလတ်တန်းစားတစ်ယောက်အတွက် Passive Income ကဘယ်လောက်လက်တွေကျမလဲ? ဘယ်လောက်အထိအလုပ်လုပ်စရာမလိုလောက်အောင် Passive ဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ရ အောင်။ ကဲဆရာကြီးတွေညွန်းလေ့ရှိတာတွေနဲ့ စရအောင်.
၁. Stock Share လုပ်ငန်းများ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာStock Share ဈေးကွက်ကြီးကြီးမားမားမရှိသေးပါဘူး။ နေ့စဉ် trading value လဲမများပါဘူး။ Dividend ကိုမှိခိုရပါမယ်။ ထိုင်စားနိုင်လောက်အောင် ရမဲ့ Dividend ဆိုရင်တော့ အရင်းအနှီးကြီးကြီးမားမားလိုပါမယ်။
၂. အိမ်ခြံမြေ ငှားရမ်းခြင်း ။ ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အိမ်ခန်းငှားစားတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။လောက်လောက်လားလား အိမ်ငှားခရနိုင်မဲ့ အိမ်တစ်လုံးဟာ ပုံမှန်အားဖြ့င့် အရင်းအနှီးကြီးလေ့ရှိပါတယ်။ ကဲ တနည်းနည်းနဲ့ ဝယ်ပြီးရင်တောင် ဒီအိမ်က အငှားမရသ ရွေ့ income ကမဝင်သေးဘူး။ ဘဏ်က ချေးငွေယူပြီး အငှားချထားမယ်ဆိုရင်တော့လဲ တစ်လချင်းသွင်းရတဲ့ ငွေနဲ့ ပြီးရင်အိမ်ငှားခနဲ့ မကိုက်တာကို တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ဒီမှာ သင့်ရဲ့ မိသားစုကို Support လုပ်ဖို့အတွက် သင်က Active income ရှိနေမှရပါမယ်။ ငှားစားမယ်ဆိုပါစို့ အိမ်ပြင်တာတွေ၊ အိမ်ပြတာတွေ၊ ဈေးစကားပြောတာတွေ ရှိမယ်။သိပ်တော့ Passive မဖြစ်ဘူးနော်။ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်အရင်းအနှီးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဖို့ဆိုရင် ပွဲစားကိုပဲအားကိုးလို့ရမယ်ထင်ပါလား၊ Passive မဖြစ်ပဲ Full Time Job တောင်ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်။ ဒီမှာ လုံးဝမလုပ်နဲ့လို့မပြောဘူးနော် အရင်းအနှီးရှိရင်တော့ စဉ်းစားသင့်တဲ့အထဲမှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထင်သလောက် Passive မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ။
၃. Franchise လုပ်ငန်းများ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းမှာ စနစ်ကျတဲ့ Franchise တွေရှားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားFranchise တွေ က တော်တော်များများကိုလိုက်မေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက် Franchise Fees အပြင် အရင်းအနှီးကြီးပါတယ်။ လက်ထဲရှိတဲ့ အရင်းအနှီးနဲ့ဆိုရင် တော်တော်ရှာယူရမှာပါ။ ကဲဒီလောက်ကြီးရင်းနှီးပြီးရင် Manager တွေနဲ့ ပစ်ထားမှာလား၊ ကျွန်တော်တော့ ဒီလောက်သတ္တိမရှိဘူးဗျ။
၄. Internet Website ကရတဲ့ ဝင်ငွေဆိုတာတော့ သိပ်နားမရှင်းဘူးဗျ၊ ဆရာတွေရေးထားလို့သာ။Website ကြီးရှိနေရုံနဲ့တော့ ဝင်ငွေရ နေမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Hosting Fee တော့ကုန်နေတာတော့သိတယ်။ တကယ်တမ်းက ကိုယ့်ရဲ့ website မှာပေးတဲ့ product သို့ ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှုတည်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများရှိသလို ဝင်ငွေလဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲတစ်ခြား Passive income ရနိုင်ထာတွေကို ကြည့်ရအောင်။
၅။ Online Shopping ။ ။ ခေတ်စားသလို ပြိုင်ဘက်လဲများတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် Passive Income လား ဆိုတော့ No ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲရောင်းရောင်း သူများပစ္စည်းကိုပဲ ရောင်းရောင်းပြိုင်ဘက် တွေများလွန်းတော့ ယှဉ်ပြီးရောင်းနိုင်မှ၊ CB ကနေ customer မေးတာကိုအချိန် မရွေးဖြေနိုင်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကိုယ့်မှာ အချိန်ပြည့်အလုပ်တစ်ခုလဲရှိနေတယ်ဆိုရင် နေ့ခင်းထမင်းစားချိန်တွေ ရုံးဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွေ မှာအားချိန်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။
၆။ Taxiထောင်မယ်။ Taxi တစ်စီးကို သိန်း ၁၀၀ ကနေ သိန်း၂၀၀ကြားရင်းရပါမယ်။ အုံနာကြေးက တစ်နေ့ တစ်သောင်းမှ တစ်သောင်းခွဲ လောက်ရနိုင်တယ်။ ဒီမှာ ရလာတဲ့ဝင်ငွေက အသားတင်မဟုတ်ဘူးနော်။ ကားပြင်စားရိတ်တွေ၊ အာမခံကြေးတွေ၊ city taxi ကြေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ညနေ ကားသိမ်းတာ၊ မနက်ကားထုတ်ပေးတာ၊ အုံနာကြေးကောက်တာ လုပ်ရမယ်။ ကားပြင်တဲ့နေရာမှကိုယ်တိုင်နားလည်ပြီး မလိုအပ်တာမကုန်အောင်၊ ခဏခဏမပျက်အောင်တော့ ကြီးကြပ်ဖို့လိုမယ်။ ကားအကြောင်းနားလည်မယ်၊ Driver စိတ်ချရမယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ Passive တော့နေလို့မရဘူးနော်။
၇ ။ ငွေတိုးချေးစားမယ်။ ဒါကပုံမှန်လုပ်နေကျအလုပ်ပဲ။ အတိုးလေးလဲပုံမှန်ရတော့ ကိုက်သလိုရှိနေတယ်။ အသိမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ကိုပိုက်ဆံချေးလိုက်ပြီး လုံးဝပြန်မရတော့တာတွေ တောင်းရခက်နေတာတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ မချေးခင်ကတော့ အားလုံးကစိတ်ချပါလို့ပြောကြတာပဲ။ ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးနော်။ တကယ့်ငွေးတိုးချေးတဲ့သူတွေကတော့ ငွေချေးလိုင်စင်လျှောက်တယ်၊ အပေါင်ပစ္စည်းကိုသေသေချာချာစစ်ဆေးတယ်။ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ သေချာစာချုပ်ချုပ်တယ်။ သိပ်တော့ Passive မရဘူး။
ဒီမှာပြောချင်တာက investment မလုပ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မလုပ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ Passive Income ဆိုတာမရှိဘူး။ Part-time job ပဲရှိတယ်လို့ပြောချင်တာ။ အလုပ်ကိုအလုပ်လိုမလုပ် ရင်တော့ ဝင်ငွေကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ မိတ်ဆွေတို့သေချာစဉ်းစားရမှာက လက်ရှိဝင်ငွေရနေတဲ့လုပ်ငန်းကို ဘယ်လောက်အထိဦးစားပေးမလဲ၊ part-time ကိုဘယ်လောက်ဦးစားပေးမလဲ။ ပြီးတော့ Passive Income ကြောင့်လက်ရှိဝင်နေတဲ့ Active Income ကိုမထိခိုက်စေသင့်ဘူး။
Passive Income ကိုရအောင်ကြိုးစားပါဆိုတဲ့ ဆရာကြီးတွေတောင် active income အတွက် full-time job လုပ်နေကြတာပဲ။ ဒီအလုပ်ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ကို passive income သင်တန်းပေးတဲ့ အုလုပ်ပါ။ တခြားစဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့ Passive income ထက် လက်ရှိအလုပ်မှာ Skill ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီး ရာထူးတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်အကိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်လုပ်ပြီး ဝင်ငွေပိုကောင်းအောင်လုပ်တာလဲပိုပြီးလက်တွေ့ဆန်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။